10 Best Bakeries Iji Gbalịa Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Best Bakeries Iji Gbalịa Na Europe
10 Best Bakeries Iji Gbalịa Na Europe
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel Denmark, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
Njem na a ụtọ eze, tinye uche! Ị pụrụ ịbụ na i chere na njem site Europe dị nnọọ n'ihi na-agbalị si desserts, ma ị ga-. Europe nwere ụfọdụ mma nri pụrụ iche nke ga-ewetara gị nso ka omenala nke mba ị na-ịgagharị. Plus, ha ga-enwekwa obi ụtọ gị uto buds. Gịnị na-agaghị n'anya?
Ọ bụrụ na echiche na-ada na-akpali akpali iji na-agbalị na ị na-eche ebe na-amalite, adịghị ichegbuwe onwe. Iji nyere gị aka ikpebi, anyị na-na weere a sweet ndepụta nke 10 Best Bakeries na-agbalị na gị na njem na Europe. Ka anyị nwere a nso lee anya na ha:
1. Amsterdam, The Netherlands - My Little Patisserie
Ọ bụ obere na-ezute na-mere French nri pụrụ iche na mba ndị ọzọ, ma ọ dịghị ihe na-echegbu - na-eme achịcha bụ French. My Little Patisserie awade nile di iche iche nke ụtọ eze French utọ, tinyere chouquettes na eclairs, ndị ọzọ specialties.
Na a omenala French imewe, My Little Patisserie n'ụzọ zuru okè na-enye mmụọ nke France na Dutch ọnọdụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ha na-eji omenala French Ezi ntụziaka na mgbe na-egbo gị cravings. Ị gaghị agbaghara a ma ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na Amsterdam!
2. Rome, Italy - na-eme bred House
Nke a na-eme bred bụ ihe ọzọ yiri azụ-si-nke-mmiri ọnọdụ, dị ka ọ bụghị ihe niile banyere Italian pastries. Kama, ndị na-eme bred House specializes na cupcakes, a nditịm American mmasị mepụtara na ike nnọọ ụtọ ị ga-ekwesịghị ịhapụ.
Ihe kacha mma banyere na-eme bred House bụ dịgasị iche iche nke flavors, dịkarịa ala ebe gị uto buds na-echegbu. Ma ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume na-agbalị otu cupcake, gị beach ahụ agaghị na-ekele gị. Otú ọ dị, ndị a cupcakes nwere ike ịbụ kwesịrị okodu ihe mmezi awa ole na ole na mgbatị isure kwụsịrị calories.
Ọ bụrụ na ị na-na na agụụ maka nditịm Italian desserts, Biscottificio Innocenti agaghị tụkwasịrị. Ọ n'ezie kwesịrị ya n'etiti 10 Best Bakeries na-agbalị na gị njem Europe ekele ya biscotti. Ọ bụ ụlọ ahịa pere mpe nke nwere nnukwu ite na -emepụta biskiiti kachasị ụtọ nwalee na .tali.
Na ị gaghị ahụ na e bie ha n'ebe ọ bụla - Biscottificio na-eme ya na nzuzo. Jide n'aka na-ịlele ha Brutti ma Buoni. Ọ bụ a bisikiiti yiri a pyramid na ị ga-enwe ike iji na-ezu nke.
4. Paris, France - Bread na ụfọdụ echiche
The aha nke a magburu onwe ya ndị Paris na-eme bred sụgharịta ka Bread na echiche, nke bụ ihe n'ike mmụọ nsọ aha maka egwu nri. Ma mgbe ha aha na-egosi a iche iche na achicha, na bụghị ihe niile na ha na-enye.
I nwekwara ike na-enweta ha croissants! Ndị a butere ngwongwo nwere aha nke kasị mma croissants na Paris. mgbe na Paris, ọ bụghị uche otu nke kasị mma bakeries na Europe.
5. Munich, Germany - eri Coffee Fast
The ndị Munich ha n'anya pastries, na nke ahụ bụ doro anya si na elu banyere ha nwere maka Konditorei Kaffee Schneller. Ma gịnị mere ọ onye nke 10 Best Bakeries Iji Gbalịa On Your Njem Iji Europe?
Mgbe ị trudge site a dreadfully ọtụtụ, gloomy na-agwụ ike Monday, ị chọrọ ihe na-ebuli ihe gị mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-na na na Munich, Azịza ya dabeere na-atọ ụtọ, arụrụ n'ụlọ pastries. I nwere ike findthose na kọfị Ọsọ ọsọ, n'akụkụ a na-akasi obi na-ekpo ọkụ cup of cappuccino ma ọ bụ koko. Ọtụtụ mgbe, ị ga-adịghị mkpa ihe ngọpụ ileta ya mgbe niile.
Munich na Passau Ụgbọ oloko
Nuremberg na Passau Ụgbọ oloko
Zurich bụ definitive ebe anya n'ihi na nke kacha mma bakeries na Europe. The Swiss nwere oké chọkọletị na ọbụna mma achịcha dị iche iche ndị ọrụ nkà na ga-mmasị gị. Conditorei Schober bụ otu n'ime bakeries i nwere ike ịhụ na "sweet nkuku" nke Old Town.
Ọ bụ a omenala-na-achọ obere Cafe nwere ụfọdụ n'ime ndị kasị ịtụnanya pastries na ejiri mee chọkọletị i nwere ike na-agbalị. ọmarịcha ihe ndozi, oké desserts, na a jakị na enwe ke ndaeyo - ihe na-agaghi ahu n'anya?
Anyị na-agaghị na-eme na Zurich ma! E nwere otu ihe n'ebe kwesịrị ekwesị banyere na ndepụta nke kacha mma bakeries na Europe. Ahuta ka prettiest Cafe na obodo, Confiserie Sprungli bụ nnọọ ama ke Zurich.
The ọpụrụiche mere ka ha ma ama bụ Luxemburgli macaroons, ma ha chocolate bụ ikenyeneke mbiet nakwa. Ha specialties na-n'aka ka niile uche ziri ezi na-abụ abụ. Ị nwere ike ghara ịga na Confiserie Sprungli enweghị agbalị si na Luxemburgli Macarons!
8. Danish na-eme bred - Kaffehuset - Copenhagen, Denmark
I nwere ike kwughị pastries enweghị ghọtara otú ọkà na Danish na-na-eme ka ọ. Ọ bụ ya mere na ọ bụ ọ na anya ịchọta a Danish na-eme bred si Copenhagen n'etiti ndị kasị mma bakeries na Europe. The Kaffehuset bụ a anya contender n'ihi na ebe, na ha merie ya ekele ha ọnụ-atọ pastries.
The ụmụ akwụkwọ nke Copenhagen amara Kaffehuset si cheesecake, dị ka ọ na-maara na-na-kasị mma na nke kasị atọ ụtọ cheesecake na obodo. I nwere ike na-agbalị iguzogide ya ụrà, ma ị ga-abụ na ọtụtụ ida - na enwe nnọọ obi ụtọ na i mere.
Ọzọ si-nke-France European na-eme bred na mere aha ya na-atọ ụtọ French utọ, Lauderee ga enchant ị. London ife ebe a, na ị ga-kwa ozugbo ị gara London n'ihi na oge mbụ.
Macarons na ha ọpụrụiche, na ị ga-enwe ike ịgwa ha iche ha French ogbo. The ude n'ime macaron ga-agbazekwa n'ọnụ gị mgbe ị crunch na pastel-acha shei. Ọ na-adịghị ga-esi ọ bụla mma karịa!
Demel bụ a ma ama eji megharịa ọnụ oruru na Vienna maka a kpatara - ha achịcha. The Ana Demal Torte bụ a tiered chocolate showstopper na bụ otu n'ime isi ihe mere maka Demel zuru okè aha.
Demel bụ ihe karịrị nanị a njem nleta mmasị - ya akụkọ ihe mere eme bụ ihe karịrị 230 afọ ogologo, nke bụ na-adọrọ mmasị na nnukwu. Ụfọdụ ndị specialties ị pụrụ ịnụ ụtọ na e nwere ukpa achicha, Esterházy achicha, Sachertorte, na Dobos achicha. Na mpempe, ma ọ bụrụ na ị na-achọ gị kwa ụbọchị dose nke achicha, anya ọ gara n'ihu karịa Demel.
Njikere nwere agaghị echefu (na-atọ ụtọ) ezumike gị dum ezinụlọ? Gaa Leta iri kacha mma bakeries na Europe anyị ndepụta, na ị ga na-blown pụọ. Jide n'aka na-eme atụmatụ gị ezumike na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Bakeries Iji Gbalịa On Your Njem Iji Europe ” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-best-bakeries-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ebe a na-eme bred #ebe a na-eme bred #ọzara #achịcha dị iche iche London travelamsterdam travelaustria travelfrance travelgermany nje ndi njem travelswitzerland